Smartcards Kuteedzera Kunze Kwemakore Anotevera Makore | Martech Zone
Wow… kana iwe uchifunga nezvese dzakatsaurwa uye dzinoenderana nehardware yetsika yemagineti mitsetse makadhi echikwereti, ndiyo tani yemidziyo uye mari kunze uko kutsiva. Mumakore mashoma anotevera, zvakadaro, ndizvo chaizvo zvichaitika! Makadhi echikwereti echinyakare ari munzira yavo yekubuda.
Zvakatora kubiridzirwa kwemamirioni makumi manomwe Target makadhi echikwereti mukati megore ra70 rezororo kukurudzira Congress kuti vasiye makadhi asina kugadzikana anemagineti-mitsetse anoshandiswa nevazhinji veAmerica uye nekumisikidza nguva yekupedzisira yeiyo nyowani (kuUS, zvakadaro) smart kadhi tekinoroji. Nepo maAmerican vari kungotanga kudzidza kuti yakadii kadhi iri, zvave (zvakabudirira) kushandiswa mune mimwe misika kweanopfuura makore makumi maviri, zvichiita iyo US musika mukuru chete papasi uchiri kushandisa swipe uye kusaina tekinoroji.
Iyo Nyowani Technology inozivikanwa se EMV (inomirira: Europay, MasterCard uye Visa) - inozivikanwawo se smart makadhi. Makadhi akachenjera anoshandisa chip uye PIN kana chip uye tekinoroji tekinoroji pamwe nezvikamu zvakati wandei zvekuchengeteka, kusanganisira chip yakadzamirwa uye yakasarudzika yekuzivikanwa, iyo inogona kuchinja chero nguva.
Kubiridzira sisitimu yekuunganidza ruzivo pane chip uye kugadzira kadhi rechikwereti rekunyepedzera kwakaoma nepo magnetic stripe kadhi, dhata inogona kuverengerwa, kunyorwa, kudzimwa kana kuchinjwa neese-pasherufu michina, zvichikonzera kubiridzira kiredhiti kadhi. Mumisika umo makadhi akachenjera akaiswa, kurasikirwa kwakaderera muhafu uye kunyepedzera kwakadonha 78%. Mari yekuchinja inofungidzirwa kuti inosvika mabhiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora, inofanirwa kuve yakashongedzwa nevatengesi.
Tags: kadhikadhi rechikweretiemveuropayMastercardsmart kadhismartcardvhiza